बढ्यो सुनको मूल्य, — Imandarmedia.com
१भारतमा मध्यराति भ’यानक दु’र्घटना, १८ जनाको मृत्यु
२जसपा संसदीय दलको नेतामा कसले मार्दैछ बाजी , सबैलाई चकित पार्दै आयो यस्तो जानकारी
३अझै जसपामै छौँ भन्नु राजनीतिक बेइमानी – यस्तो छ महन्तको भित्रि चाल
४भूटानसँग नेपालको तुलना गर्दै मोदीले किन गरे यस्तो ट्वीट ? सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
५जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा प्रजिअकोे मनपरि ?
६उपेन्द्र यादवले सरकारमा जान खुट्टा उचालेपछि महन्थ ठाकुरले गरे झन् ठूलो तयारी
७१८ अर्ब रुपैयाँको ड्रग्ससहित समातिएका ओलम्पिक पदक विजेता खेलाडीलाई २५ वर्ष जेल
८प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारलाई चेतावनी एमसिसी सम्झौता सबै कागजात संसदमा पेस गर्न माग
९नेपालको कुनै पनि शोरुममा नपाइने पूर्वयुवराज पारसले चढ्ने बाईकको मूल्य कति ? थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ
१०नेपाल प्रहरीलाई ठगि गर्ने ४ जना पक्राउ, प्रहरी नै तिनछक्क
११बिसालु सर्पको बिगबिगी बढेपछि स्थानीय त्रसित
१२माधव नेपाल पक्षसँग वारपारको तयारी, के छ ओली एक रहस्य ?
२भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको आरोपमा वडाध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ
३प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धाको अन्तिम फैसला आउने मिति तोकियो, ओलीको तयारि बेग्लै
४बाबुराम पत्नी हिसिलाले रुदै भनिन्- भित्तासँग विवाह गरें !
५मन्त्रालयको गाडीभित्र निर्वस्त्र भएर यौनमा लिप्त १ महिला २ पुरुष भेटिए पछि….
६ओलीले माधव नेपालसामु राखे यस्तो अनौठो प्रस्ताव, नेपाल सहमत भए कि भएनन् ?
७धम्की दिएको २४ घण्टा नबित्दै गलेर आफै पानी-पानी भए ओली, यसरी सुरू भयाे ओरालो यात्रा
८प्रतिनिधीसभा विघटन मुद्धा- किन मुछियो ऋषि धमलाको नाम ? यस्तो छ रहस्य
बढ्यो सुनको मूल्य,
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा बृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा २ सय रुपैयाँले बृद्धि भएको हो ।
महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँ, तेजावी ९० हजार २ सय रुपैयाँ रहेको छ । शुक्रबार छापावाल सुन ९० हजार ५ सय रुपैयाँ, तेजावी ९० हजार रुपैयाँ र चाँदीको भाउ १ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यसअघि दुई कारोबार दिन घटिरहेको सुनको मूल्य शुक्रबार स्थिर बनेको थियो । त्यस्तै चाँदी ५ रुपैयाँले बढेको महासंघले जनाएको छ । चाँदीको भाउ १ हजार ३०५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चादी चाँदी शुक्रबार पनि ५ रुपैयाँले नै बढेको थियो ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ०३ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी युरो एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ । बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य बढ्यो, आजको भाउ कति ?
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
आज बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
ह्वात्तै घट्योसुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
सुनचाँदीको मूल्य स्थिर,
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको बढ्यो,
ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदिको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
बल्ल घट्यो खाने तेलको मूल्य, हेर्नुहाेस यस्तो छ आजको मूल्य !
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?